Soo dejisan Microsoft Office Excel Viewer 12.0.4518.1071... – Vessoft
Soo dejisan Microsoft Office Excel Viewer
Xafiiska Microsoft Excel siladda – qalab ku anfacaya in ay sii wadaan files Excel. Software ayaa u saamaxaaya in ay u arkaan oo daabacan dokumenti kasta oo qaab Excel aan u baahan si loo soo dajiyo nooca buuxda ee Microsoft Office Excel. User lagu siiyey fursad ay ku nuqul ka kooban dokumentiyo ama qaybo gaar ah oo ay si dhig codsiyada kale. Microsoft Office Excel siladda u saamaxaaya in ay u arkaan in waraaqaha qaabab kala duwan, la beddelo nooca bogga, shaandheyn qoraalka, qabsato miisaanka iyo fursadaha kale ee bogga. Xafiiska Microsoft Excel siladda ayaa ka shaqeynayaan xadidan, taas oo ah ma jiraan qalab xaalkaa, badbaadiyo ama la abuuro miisaska cusub oo elektaroonig ah. Software ka kooban yahay dhowr ah qalab iyo hawlaha kala duwan oo si weyn loo fududeeyo daawashada ka mid ah waraaqaha Excel.
Galitaanka iyo daabacaadda ee files Excel
Search Easy dokumentiga
Koobiyeynta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira dukumiintiga
Habaysaa saldhigyo page
Comments on Microsoft Office Excel Viewer:
Microsoft Office Excel Viewer Software la xiriira:
English, Français, Español, Deutsch... WPS Office 10.1.0.5579
English, Українська, Français, Español... LibreOffice 5.2.2 iyo 5.2.3 beta 1
العربية, English, Українська, Français... Ditto 3.21.50
English, Українська, Français, Español... Tixati 2.47 Standard iyo Portable